Mandehana mankany Japon hanatrika ny lohataona hanami | Vaovao momba ny dia
Mitsangatsangana any Japon hanatrika hanami lohataona
Maria | | Japana, Inona no ho hita
Mandritra ny lohataona dia lava kokoa ny andro, mahafinaritra kokoa ny mari-pana ary afaka mankafy ny natiora amin'ny famirapiratany rehetra isika. Izany rehetra izany dia mitaky ny voninkazo amin'ireo hazo, fahitana loko marevaka izay manazava ny mason'izay mandinika an'io fisehoan-javatra mahafinaritra io.
Ny fandinihan-dry zareo dia fomba amam-panao any amin'ny firenena toa an'i Japon, hany ka manana ny teny tokana ilazalazana an'ity hetsika ity, hanami, izay adika amin'ny teny Espaniola hoe "mahita voninkazo."
Ny lohataona angamba no fotoana be mpahalala indrindra hahalalana ny firenena, satria efa lasa ny hatsiaka mangatsiaka amin'ny ririnina ary mbola tsy tonga ny hafanan'ny hafanana. Nandritra io fotoana io koa dia nipoaka ny felan'ny serizy, izay nahasarika mpizahatany vahiny maro any Japon.
Raha mieritreritra ny handeha ho any Japon ianao dia ity angamba no fotoana manokana nandrasanao. Eto izahay dia milaza aminao momba ny hanami sy ireo voninkazo serizy mahafinaritra.
1 Inona ny hanami?
2 Karazan-kazo serizy nambolena tany Japon
3 Faharetan'ny voninkazo
4 Rahoviana izy ireo no mamony?
5 Aiza no hankafizanao hanami?
Inona ny hanami?
Sary avy amin'i Lotodorado
Teny ampiasaina hilazana ny fandinihana ny voninkazo serizy rehefa tonga ny lohataona. Fomban-drazana tena hajain'ny Japoney izany, izay tanterahin'izy ireo amin'ny maha-fianakaviana hatramin'ny taranaka lasa hatramin'ny taonjato faha-XNUMX.
Mandritra ny hanami, ny japoney dia mirohondrohona mankeny amin'ny valan-javaboahary sy zaridaina mba hanao fitsangantsanganana ary hankafy ity fahitana natiora ity. Tsy misy toa ny mandany andro lohataona amin'ny masoandro sy mankafy sakafo maivana amin'ny orinasa tsara raha misaintsaina an'io tranga marefo io.
Ny tazo hanami dia toy izany ny fandefasan'ny vaovao ny toetr'andro hanaraka ny voninkazo serizy manerana ny firenena, hatrany atsimo ka hatrany avaratra rehefa miakatra ny mari-pana. Misy mihitsy aza ny apps ho azy.
Karazan-kazo serizy nambolena tany Japon
Sary avy amin'ny RTVE
Misy karazana hazo serizy isan-karazany, samy hafa voninkazo. Anisan'ireo karazany matetika indrindra ny:
The Shidarezakura: hazo serizy misy voninkazo mavokely izay toa latsaka amin'ny tany ny rantsany.
The Somei Yoshino: hazo serizy misy voninkazo mavokely fotsy izay ny karazany dia iray amin'ireo ankafizin'ny olona sy ambolena indrindra ao Japana.
Ny Yamazakura: ity karazana serizy ity dia miparitaka manerana ny firenena saingy tsy dia mahavariana noho ny teo aloha satria ny voniny dia mivelatra miaraka amin'ny ravina, mampihena ny fiantraikan'ny iray manontolo.
Sary avy amin'ny Hello
Angamba ny antony mahatonga ny hanami mankasitraka fatratra any Japon dia noho ny androm-piainan'ny felan'ny serizy. Ny hatsarany dia ampahany amin'ny hatsarany ary izany no mahatonga ny Japoney hahatsapa tena fifikirana amin'ity voninkazo antsoiny hoe sakura sy hanami ity.
Matetika ny felana serizy dia maharitra tapa-bolana. Amin'ny voalohany, ny voninkazo dia mitsimoka amin'ny rantsany mandra-pahatongany any amin'ny famirapiratany farany (mankai amin'ny teny Japoney) raha ny faharoa kosa malazo ireo voninkazo avy any amin'ireo hazo. Azo hafafaingana ny fizotrany raha misy rivotra na orana, izany no mahavariana ny hanami.
Rahoviana izy ireo no mamony?
Tamin'ity taona 2017 ity dia nanambara ny Fikambanana Meteorolojika Japoney fa hiroborobo ny hazo serizy amin'ny 23 martsa any Fukuoka, amin'ny 25 martsa any Tokyo sy ny nosy Kyushu, amin'ny 28 martsa any Osaka, amin'ny 29 martsa ao Hiroshima, amin'ny 30 martsa ao Kobe, amin'ny 31 martsa tany Kyoto, ny 20 aprily tany Sendai, ny 21 aprily tao Aomori ary ny 5 mey tao Sapporo nanonona tanàna vitsivitsy.
Na izany aza, Zava-dehibe hatrany ny manamarina ny mombamomba ny toetr'andro raha sanatria misy fiovana satria miresaka tranga voajanahary mifandray akaiky amin'ny toetrandro isika. Raha mangatsiaka izy mandritra ny herinandro alohan'ny voninkazo, dia hamony ny felana serizy aorian'izay, ary raha mafana dia hiseho aloha ny sakura amin'ireo rantsan'ny hazo.
Aiza no hankafizanao hanami?
Sary tamin'ny alàlan'ny galicianGarden
Ny tanjon'ny dia ataonao dia ho antony lehibe hamaliana io fanontaniana io. Ny felam-boninkazo dia manomboka mamony any Okinawa hatramin'ny faran'ny volana janoary ary mandroso amin'ny alàlan'ny toerana toa an'i Kyushu, Shikoku na Honshu ny dingana mandra-pahatongany any Hokkaido, izay mamony ny volana Mey.
Any amin'ireo tanàn-dehibe mpizahatany Japoney toa an'i Kyoto na Tokyo, ny vanim-potoanan'ny voninkazo dia matetika eo anelanelan'ny faran'ny volana martsa sy ny fiandohan'ny volana aprily.
Ohatra, any Tokyo ny sasany amin'ireo faritra tsara indrindra hankafizana voninkazo serizy dia ny Shinjuku Park, Ueno Park, Sumida Park na Yoyogui Park raha any Kyoto ianao dia afaka mahita hanami ao amin'ny Maruyamma Park, ny Temple Kiyomizudera, ny Philosopher's Pass, ny Ninnaji Temple na any ny Valan-javaboary Mount Kagasi eo ivelan'ny tanàna.
Na aiza na aiza toerana nofidinao, raha manana fotoana mety hankafizanao ny hanami any Japon ianao, dia hitondra fahatsiarovana tsy manam-paharoa sy tsara tarehy amin'ny dianao mankany amin'ny Far East.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » Japana » Mitsangatsangana any Japon hanatrika hanami lohataona
Toerana 6 hitsidihana mandritra ny dia mankany Beirut
Ny tranombakoka eoropeanina ilaina rehefa mandeha